Hippocampus, amygdala နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု - စွဲလမ်းမှုကိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သောအပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်စနစ်များ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2011 ဇူလိုင် 22 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2011 ဇန်နဝါရီ; 1216: 114-121 ။
ပေါ်လင်း Belujon နှင့် အန်သိုနီအေကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ
Stressis အထူးသဖြင့် relapse နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းများ, တဦး။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအကြားအပြန်အလှန်အခြေခံသည့်ယန္တရားများမသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopaminergic ဆုလာဘ်စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတစ်ခုတိုးလာ dopaminergic လှုပ်ရှားမှုဟာ ventral subiculum-နျူကလိယ accumbens ၏အလားအလာကနေတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးထိခိုက်စေကွဲပြားခြားနားသောဖိအားများကသွေးဆောင်ကြောင်းပြသ (NAc) လမ်းကြောင်း။ စိတ်ဖိစီးမှုအတွက် NE စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍလူသိဖြစ်သော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုလျော့နည်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဖိအားဟာ ventral subiculum-accumbens လမ်းကြောင်း modulate နိုင်ပြီး, ဘယ်လိုသောဤ Module မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုမြားတှငျပွောငျးလဲသွေးဆောင်နိုင်သည့်အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောယန္တရားများစူးစမ်း။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့နှစ်ယောက် NAc ဖို့အဓိက afferents, အ basolateral amygdala နှင့် hippocampus ၏ ventral subiculum, နှင့် locus coeruleus-norepinephrine စနစ်ဖြင့်မိမိတို့၏ interaction ကအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
keywords: အဆိုပါ hippocampus, basolateral amygdala, locus coeruleus-norepinephrine စနစ်, mesolimbic စနစ်, နျူကလိယ accumbens ၏ ventral subiculum
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏ pathophysiology သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအစဉ်အလာစွဲ, relapse နှင့် abstinence စဉ်အတွင်းသွေးဆောင်ဖြစ်ကြောင်းဆုလာဘ်-အထိခိုက်မခံဒေသများအတွက်အာရုံကြောအပြောင်းအလဲများအပေါ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အလေးပေးအတူစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် dopaminergic ဆုလာဘ် system ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ 1, 2။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးကိုသဘာဝဆုလာဘ် processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်အာရုံကြော circuitry အတွက်ရောဂါဗေဒတုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်ယုံကြည်နေသည်, ဤ allostatic ပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံသည့်ယန္တရားများကျယ်ပြန့်သုတေသနတစ်ခုခေါင်းစဉ်ပါပြီ 3။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) ကအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသော mesolimbic စနစ်သည်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Mesolimbic dopamine, သဘာဝနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဆုလာဘ်များအပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေကြိုးလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hedonic ရှုထောင့် mediates ဖြစ်ပါတယ် 4အမူအကျင့်အားဖြည့်များအတွက်သင်ယူမှု signal ကိုကဲ့သို့၎င်း, လုပ်ရပ်များ 5။ တစ်ဦးကမော်ဒယ်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေစဲဖြစ်ပါတယ်ပင်ရှည်လျားပြီးနောက်ပြန်သွားကြသည်ဖို့ persistent အားနည်းချက်ရှင်းပြသောစွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာထို mesolimbic စနစ် Synaptic plasticity အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ပြုပြင်မွမ်းမံ, အထူးသဖြင့် VTA နှင့် NAc, ဤ neuroadaptations ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် dopamine receptors ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအခန်းကဏ္ဍအများအပြားလေ့လာမှုများများ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြပြီ။ မူးယစ်ဆေးထိတွေ့စဉ်နှင့်ပြီးနောက် limbic ဒေသများတွင် excitatory Synaptic ဂီယာ၏မော်ဂျူမူးယစ်ဆေး relapse နှင့် reinstatement အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပြသထားသည် 1။ အရှင်ဦးနှောက်၏ limbic ဒေသများတွင်အများအပြားတွင် neuron ဆဲလ်အမျိုးအစား morphological အဖြစ် Synaptic ပွောငျးလဲရေရှည်အပြုအမူ plasticity မောင်းနှင်မှုစွဲတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည် 6။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးစွဲကုသအတွက်အခက်ခဲဆုံးအဆင့်မူးယစ်ဆေးရုပ်သိမ်းရေးမပေးကြောင်းကိုယခုကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ relapse ကာကွယ်ပေးနိုင် 7, 8။ မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ Relapse များသောအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အတူတဏှာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါဟာဆုတ်ခွာမလကြာလျှင်ပင်ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်, စွဲတဏှာအဘို့အပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ပြုမူကြောင်းမူးယစ်ဆက်စပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိခိုက်မခံတဲ့ဖြစ်လာကြောင်းအကြံပြုထားသည် 9-11.
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှပြန်သွားကြသည်အထောက်အကူပြုသိသောများစွာသောအချက်တွေတစ်ခုမှာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်လက်တွေ့မြောက်မြားစွာအဖြစ်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုကြီးစိုးအခန်းကဏ္ဍပြခဲ့ကြ 12။ သို့သော်ဒီဆက်ဆံရေးဟာအခြေခံသည့်ယန္တရားများမသိရသေးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် psychostimulants စိတ်ဖိစီးမှု psychostimulants နှင့်အပြန်အလှန်ကြီးထွား Response မှဦးဆောင်အတူ Cross-sensitize ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးာင်းရှယ်ယာအခြေအနေတွင်အပေါ်သူတို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့မှီခိုကြောင်းတစ်ခုမှာဘုံအင်္ဂါရပ်။ အမှန်စင်စစ်တိကျတဲ့အခြေအနေတွင်အတွက်ဖိအားထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များထိုအခြေအနေတွင်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများပြသ 13, 14နှင့် psychostimulant ာင်းတိရစ္ဆာန်မူးယစ်ဆေးကိုအပ်ထားပြီးသည့်အတွက်တူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်စမ်းသပ်ပြီးကြသောအခါ သာ. ကြီးမြတ်သည် 15, 16။ context-မှီခိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီးသောဒေသဟာ hippocampus (vSub) ၏ ventral subiculum ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ vSub အခြေအနေတွင်-မှီခိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည် 17 အဖြစ်ကအခြားအခြေအနေတွင်-related ဖြစ်စဉ်များ 18-20။ အဆိုပါ vSub စိတ်ဖိစီးမှု-related ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုလည်းအဓိကဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည် 21 စိတ်ကြွဆေးနှင့် hyperdopaminergic တုံ့ပြန်မှု 22, 23။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပတ်သက်သောနောက်ထပ် key ကိုဝါကျဖွဲ့စည်းပုံ basolateral amygdala (BLA) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ amygdala အတွင်းအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးရှသောဖိအား, နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုနှင့်အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်ထိခိုက်နေသည် 24, 25။ အဆိုပါ amygdala အတွင်း Synaptic plasticity လည်းစိတ်ဖိစီးမှုမှထိတွေ့မှုကြောင့်ထိခိုက်နေသည် 26။ အရေးကြီးတာက, အ BLA မူးယစ်ဆေး-related မှတ်ဉာဏ်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်အထူးသဖြင့်လည်းမူးယစ် relapse အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည် 27။ ထို့အပြင် BLA အဆိုပါ vSub တစ်အစွမ်းထက် input ကိုထောက်ပံ့ 28။ ပစ္စုပ္ပန်သုံးသပ်ချက် NAc အဲဒီနှစ်ခုကိုအဓိက afferents အာရုံစိုက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး relapse, မူးယစ်ဆေးရှာကြံအပြုအမူနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ dopamine ဆုလာဘ်စနစ်က
ဒါဟာ mesolimbic dopaminergic အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များရှိသည်သောယခုလူသိများသည်။ DA အာရုံခံ၏လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုမှသက်ဆိုင်ရာ, ကောက်ကာငင်ကာတက်ကြွစွာနှင့်မလှုပ်မရှားအာရုံခံ: Dopaminergic အာရုံခံသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ်အခြေခံပြီးအုပ်စုနှစ်စုသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် 29။ နှေး, မမှန် "လုပ်သူများ" ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံနှင့်တစ်ဦးစိမ်းဖြင့် "phasic" ပုံစံ: ကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ်သော DA အာရုံခံ၏, ထိုပစ်ခတ်ရန်ပုံစံနှစ်ခုလှုပ်ရှားမှုပုံစံများအတွက်တည်ရှိရန်လေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ် 30, 31။ အဆိုပါစိမ်းဖြင့်ပစ်ခတ်ပုံစံနိုး-ပြုမူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်, ဒါမှမဟုတ် afferents ၏ဆွနေဖြင့်ပြင်ပဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အစပျိုးနေသည် 5, 22။ အဆိုပါ mesolimbic DA စနစ်၏အဓိက efferents တ NAc ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းစွာတိုက်ပစ်ခတ်ပုံစံကြီးမားတဲ့ phasic, အ synapses အတွက် dopamine ၏ယာယီအထွတ်အထိပ် mediates သော်လည်းထို့ကြောင့်မမှန်ပစ်ခတ်ရန်လှုပ်ရှားမှုဟာ NAc အတွက်လုပ်သူများ DA အဆင့်ဆင့် modulate ပါလိမ့်မယ် 32။ အဲဒီနှစျခုပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများဟာ VTA မှ afferents အမျိုးမျိုးအားဖြင့်သွေးဆောင်နေကြသည်။ အဆိုပါစိမ်းဖြင့်ပစ်ခတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ pedunculopontine tegmentum (PPTg) အားဖြင့် VTA အတွက်အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်မောင်းနှင်နေသည် 32, 33, dopamine ၏လုပ်သူများလွှတ်ပေးရန် mediates ကြောင့်လူဦးရေပစ်ခတ်ရန်အတွက် vSub-NAc-ventral pallidum-VTA (ပါဝင်သည်ဟုတစ်ခုသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း၏ activation အားဖြင့်သွေးဆောင်သည်ကိုသော်လည်းပုံ 1) ။ ဒါကလမ်းကြောင်းဂါဘမြို့သား၏ muscimol / baclofen (တိကျတဲ့ agonists ၏ NAc နှင့်ဒေသခံဆေးထိုးသို့ထိုးသွင်း kynurenicacid များ၏စွမ်းရည်ကိုကအတည်ပြုခဲ့ပြီးA / B, DA အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်အပေါ် vSub activation ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့ဖို့ ventral pallidum အတွက် receptors) 32။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီနှစ်ခုပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများအနေနဲ့သင့်လျော်သောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုသွေးဆောင်များ၏ညှိနှိုင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကောက်ကာငင်ကာပစ်ခတ် DA အာရုံခံ၏နံပါတ်ကွဲပစ်ခတ်ရန်သို့မောင်းနှင်နိုင်ဆဲလ်များ၏နံပါတ်များကိုဆုံးဖြတ်သည်ကြောင်းပြသကြ 22။ ထို့ကြောင့်, vSub လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုတခုအထူးသ phasic ဖြစ်ရပ်ဖို့ DA system ကိုတုန့်ပြန်၏လွှဲခွင်တိုးမြှင့်။
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) display ကိုကွဲပြားလမ်းကြောင်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှစ်ခုပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများထံမှ Dopaminergic အာရုံခံ။ အဆိုပါ phasic ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်ပုံစံဟာ peducunlopontine tegmentum (PPTg) ကနေတိုက်ရိုက် excitatory သွင်းအားစု (အနီရောင်မြှား) ကသွေးဆောင်နေသည် ...
အဆိုပါ ventral subiculum နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု / မူးယစ်ဆေး relapse
အဆိုပါ vSub အများအပြား limbic-related ဒေသများအထူးသဖြင့် NAc ဖို့ပရိုဂျက်ပေးပို့ခြင်း, အ hippocampus ၏အဓိကထွက်ရှိဖြစ်ပါသည် 34။ အဆိုပါ vSub ထိုကဲ့သို့သောကွောကျမကျအေးစက်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေတွင်-မှီခိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် 17, 19, မျိုးသုဉ်း 35မူးယစ်ဆေးဝါးာင်း 12 နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု 36.
လေ့လာရေး vSub inactivation မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက် vSub ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ, ကိုကင်းနှင့်အ cue-သွေးဆောင် reinstatement လျော့ကျကြောင်းပြသကြ 37။ မူးယစ်ဆေးာင်းအဆိုပါစွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးတဏှာပုံစံအဆိုပြုပြီးပါပြီ 38 နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-abstinent ဘာသာရပ်များအတွက် reinstatement နှင့် relapse အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်အခြေအနေတွင်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေသည့်အပြုအမူမှ recidivism အတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှလူသိများသည် 37။ မူးယစ်ဆေးာင်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုတည်းမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုမှတစ်ဦးမြင့်တုန့်ပြန်မှု, ထိုကဲ့သို့သောကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးအဖြစ် psychostimulants ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ဖော်ပြနေသည် 39။ ဒီအမူအကျင့်ာင်းလူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးမြှင့မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားပြီး 38။ စိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, vSub-NAc လမ်းကြောင်းအပေါ်မှီခိုသောအရာတခုတိုးလာ mesolimbic DA အာရုံခံဆဲလျ drive ကိုမှ, attribute ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့, စိတ်ကြွဆေး-sensitized ကြွက်များတွင် vSub ၏ inactivation Basal အဆင့်ဆင့်ဖို့ DA လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုပြုပြင်နှင့်စိတ်ကြွဆေးဖို့အမူအကျင့် Hyper-response ဖယ်ရှား 23။ ထို့အပွငျကိုကင်းာင်း D1-receptors activation အပေါ်မှီခိုသည့် vSub-NAc လမ်းကြောင်းအတွက်ရေရှည်အလားအလာ induces 40။ ဒီလေ့လာမှုတွေအားလုံးမူးယစ်ဆေးာင်းအတွက် vSub ၏ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးစိတ်ဖိစီးမှုဖို့တုန့်ပြန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုအဖြစ်အလားတူဦးနှောက်ဧရိယာများထိတွေ့ဆက်ဆံ။ စိတ်ဖိစီးမှု homeostatic ချိန်ခွင်လျှာများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအားဖြင့် modulated သပ္ပါယ်အပြောင်းအလဲများကို inducing စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် 41။ အတော်များများကလေ့လာမှုများကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် vSub တစ်ခုတိုးပွားလာအခန်းကဏ္ဍပြခဲ့ကြ 42။ ထို့ကြောင့် hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဖိအားအခြေအနေများအောက်တွင်တိုးမြှင့်သွေးရည်ကြည်ဟာ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) ၏အဆင့်ဆင့်နှင့် corticosterone ဆက်စပ်နေသည် 43တိရိစ္ဆာန်များ၌၎င်း, တစ်ဦးလျော့နည်းသွားစိတ်ဖိစီးမှုတံခါးခုံ 44။ အဆိုပါ vSub ၏အဓိကစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုမှာ, multisynaptic လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်, စိတ်ဖိစီးမှုဖို့ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုး၏တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ် 45။ ထိုမှတပါး, ထိုကဲ့သို့သော prefrontal cortex, အ amygdala နှင့် NAc ကဲ့သို့သောအခြား limbic system ကို-ဆက်စပ်ဒေသများသည်, HPA ဝင်ရိုးထိန်းညှိပြကြပြီ 45။ ဤသည် limbic အချက်အလက်များကို homeostatic စနစ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပြီးအလုပ်မဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှုဒီ circuitry အတွက် dysregulation ပါဝင်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါ locus coeruleus-norepinephrine (LC-NE) စနစ်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရတဦးတည်းရဲ့အဓိကစနစ်များသည်။ တကယ်တော့, corticotropin-releasing အချက်, စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း ACTH ၏လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်လိမ့်မယ်တဲ့ဟော်မုန်း, တိကျတဲ့စိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်အတွက် LC-NE system ကိုသက်ဝင်စေဖို့ပြသထားသည် 46။ ထို့ကြောင့် Vivo အတွက် 47 နှင့်စသည်တို့အတွက် 48 လေ့လာမှုများ CRF ၏အုပ်ချုပ်မှု NE efflux တစ်ခုတိုးနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်း LC ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းတစ်ခုတိုးသွေးဆောင်ကြောင်းပြသကြ 47။ အဆိုပါ vSub အဆိုပါ LC ကနေထင်ရှားတဲ့ NE innervation အားလက်ခံတွေ့ဆုံ 49နှင့် NE vSub အာရုံခံတစ်ခု activation ထုတ်လုပ်နိုင်သည် 50။ ကြွက်များတွင်, vSub အဆိုပါ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် beta ကို-adrenergic receptors ၏အမြင့်ဆုံးသိပ်သည်းဆရှိခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြနေသည် 51။ ထို့ကြောင့် vSub သို့ NE လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့် beta ကို adrenergic receptors ၏တက်ကြွစွာ vSub မှ glutamatergic afferent input ကိုမှတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အားကြီးသော modulatory အကျိုးသက်ရောက်မှုသွေးဆောင်ခြင်းငှါ 52, 53.
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုရှယ်ယာအများအပြားဘုံ features တွေ, အထူးသဖြင့်အတွင်း dopamine သွေးဆောင်နိုင်စွမ်းအဖြစ် norepinephrine လွှတ်ပေးရန် limbic ဒေသများတွင် 54 နှင့် vSub implicating အခြေအနေတွင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခိုင်မာတဲ့အသင်းအဖွဲ့။ ထိုမှတပါး, စိတ်ဖိစီးမှု psychostimulants နှင့်အတူ Cross-sensitizes ။ တစ်နောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အပြန်အလှန်ထိတွေ့သောအခါထိုသို့တဲ့ဖိအားထိတွေ့တိရစ္ဆာန်စိတ်ကြွဆေးတစ်ဦးမြင့်တုန့်ပြန်ပြပါလိမ့်မယ် 16။ ကျနော်တို့စူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုဟာ VTA အတွက်လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးသွေးဆောင် bya2h ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု protocol ကိုဖြစ်ပေါ်စေ, ဤတိုးလာသည့် vSub အတွက်ဆိုဒီယမ်-ရုပ်သံလိုင်း inhibitor tetrodotoxin (TTX) ၏ပြုတ်ရည်များကပြောင်းပြန်ကြောင်းပြသကြ 55။ ယခင်လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ 2hr ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း protocol ကိုစိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်ာင်းသွေးဆောင်ဖို့ဖော်ပြထားခဲ့ပြီး 56။ ထို့ကြောင့်တိုးလာ VTA လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုစိတ်ကြွဆေးတစ်ဦးထိခိုက်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ဖြစ်ပေါ်; ထို့အပြင် vSub inactivation အားဖြင့်ပြောင်းပြန်သောတုန့်ပြန် 55.
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီဒေတာတစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုသို့မဟုတ် psychostimulant ာင်းပြီးနောက်ဖော်ပြထားတဲ့ DA hyperactivity VTA DA အာရုံခံ၏လုပ်သူများပစ်ခတ်ရန်အတွက်တိုးလာမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နှင့် vSub-NAc လမ်းကြောင်းအတွက် hyperactivity အပေါ်မှီခိုကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ norepinephrine အားဖြင့် vSub ၏ activation အဆိုပါ NAc ဖို့ vSub efferent လမ်းကြောင်းအတွက် hyperactivity အခြေခံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သောယန္တရားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Norepinephrine နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု / မူးယစ်ဆေး relapse
Norepinephrine (NE) ကိုဦးနှောက်အတွက်အပေါများဆုံး neurotransmitters တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကရွေးချယ်အာရုံစိုက်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍ 57 ယေဘုယျ arousal 58နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု59, 60။ အဆိုပါ norepinephrine စနစ်ကအများအားဖြင့် locus coeruleus အတွက်အစပြုနှင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဖိအား၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုး LC အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးပွါးစေ 61 အဖြစ် LC အများအပြား projection ဒေသများတွင် NE ၏လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးမြှင့် 62။ အဆိုပါ dopamine-ဆုလာဘ်စနစ်ကဒီလယ်ပြင်၌လေ့လာမှုများအများစု၏အာရုံစိုက်ခဲ့အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် NE ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှည်လျားလျစ်လျူရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, NE လွှတ်ပေးရန်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ reinstatement ထိခိုက်စေအစီရင်ခံနေသည် 63။ ထို့ကြောင့် LC-NE စနစ်အားမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေဆုတ်ခွာစဉ်က activated ခံရဖို့ပြသထားသည် 64 ထိုသို့စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးမော်ဖင်းအကိုက်၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ၏အစိတ်အပိုင်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် NE လွှတ်ပေးရန်လျော့ချရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ရယူထားခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဒီလွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် 65။ ထိုမှတပါး, alpha2 adrenergic autoreceptor agonists သုံးပြီး pharmacological လေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေး-ရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် NE ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြ 66နှင့် alpha-2adrenergic ရန် dopamine-မှီခို locomotor လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးသွေးဆောင် 67.
တိုက်ရိုက် LC-NE system ကိုသက်ဝင်အပြင်ဖိအားထိုကဲ့သို့သော BLA အဖြစ် LC မှပရောဂျက်အခြားအဆောက်အဦများ, activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုတည်ဆောက်ပုံဟာ BLA ဖြစ်ပါသည် 68။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော footshock သို့မဟုတ်အမြီး-ဖြစ်တော့အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ amygdala ၏ activation သွေးဆောင် 69, 70။ ထို့အပြင် amygdala အတွင်း Synaptic plasticity လည်းကွဲပြားခြားနားသောဖိအားကြောင့်ထိခိုက်နေသည် 24, 26။ BLA အာရုံခံများ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးသွေးဆောင်, ထိုမှတပါး, နာတာရှည်အဖြစ်စူးရှသောဖိအား 71။ သို့သော် BLA အားဖြင့် LC အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုများ၏မော်ဂျူပု amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ (CeA) ၏ activation နှင့် dendritric pericoerulear ဒေသများတွင် CRF ၏လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်တံ့သော stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယကနေတဆင့်, သွယ်ဝိုက်ဖြစ်ပါသည် 72။ ထို့ကြောင့် BLA အဆိုပါ CeA မှ excitatory သွင်းအားစုပို့ပေး 70ထို့နောက် CRF လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် LC-NE system ကိုသက်ဝင်စေလိမ့်မည်ဟုတစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ 48။ အဆိုပါ LC-NE စနစ်နှင့်ယင်း BLA အကြား ဆက်စပ်. အပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် LC ဖို့သွယ်ဝိုက် projection ပေးပို့ခြင်းမှတပါး, ထို BLA အဆိုပါ locus coeruleus ကနေတိုက်ရိုက် afferent စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်, LC အားဖြင့် NE လွှတ်ပေးရန် BLA neuronsvia alpha-နှင့် beta ကို-adrenergic receptors တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု modulates 73 (ပုံ 2).
ဖိအားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ၏ dopaminergic အာရုံခံ၏လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုး inducing အဆိုပါ ventral subiculum (vSub) -nucleus accumbens (NAc) လမ်းကြောင်း၏အလားအလာမှတဆင့်ဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပြုထားပါသည်။ အဆိုပါတိုးမြှင့် ...
ဒီနျူကလိယ၏ inactivation မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပြောင်းလဲပစ်စရာမလိုဘဲ conditional-cued reinstatement အပေါ်သက်ရောက်မှုကတည်းက BLA လည်းမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှ relapse အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ 74။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအဆက်ဖြုတ်လေ့လာမှုအားကြီးသောအပြန်အလှန်အဆိုပါ dopaminergic စနစ်နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်တံ့သော NAc ကနေအာရုံခံ၏ BLA inducing cue-evoked ပစ်ခတ်ရန်အကြားတည်ရှိကြောင်းပြသထားပါတယ် 75.
အဆိုပါ BLA နှင့် vSub ကနေသွင်းအားစုတူ NAc အာရုံခံအပေါ်ဆုံမှဖော်ပြထားခဲ့ကြ 28။ အဆိုပါ BLA နှင့် vSub အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုလည်းဖော်ပြထားပါပြီ 28 BLA နှင့် vSub အဆိုပါ NAc မှာသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှု၏တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလွတ်လပ်သောနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုငျကွောငျးအကြံပြုခြင်း။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, vSub အဆိုပါ vSub-NAc လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လျာထားသည်။ ထို့အပြင် vSub မြောက်မြားစွာထိုကဲ့သို့သော LC-NE system အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု-related ဒေသများထံမှသွင်းအားစုအဖြစ်အဆိုပါ BLA အားလက်ခံတွေ့ဆုံ 28။ ကျနော်တို့ LC-NE စနစ်နှင့်ယင်း BLA ၏ဆွ vSub အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုကိုသက်ဝင်သည်ဟုမကြာသေးမီကတွေ့ပြီ 50နှင့်နှစ်ဦးစလုံးစူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်ဖိအားသူတို့အားနှစ်ခုသွင်းအားစုအတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးသွေးဆောင် 24, 76။ ထို့ကြောင့်ဖိအားများကမူးယစ်ဆေးာင်းနှင့်၎င်း၏မော်ဂျူအခြေခံတဦးတည်းအယူအဆ psychostimulants ဖို့တိုးမြှင့်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု mediates ရာ DA လူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်သည့် LC-NE စနစ်နှင့် / သို့မဟုတ် BLA က vSub-NAc လမ်းကြောင်း၏ activation ပါဝင်နိုင် ။
မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှ Relapse အချက်များတစ်ရှုပ်ထွေးခင်းကျင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွင်အဆိုပါ vSub, အ BLA ပါဝင်သော cue-သွေးဆောင် reinstatement, နှင့် vSub နှင့် BLA အပါအဝင်ကျယ်ပြန့်အာရုံကြော circuit ကိုသက်ဝင်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များပါဝငျ။ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဘုံအလွှာရှိသည်။ သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံး mesolimbic DA စနစ်၏ hyperactivation ပါဝငျကွောငျး context-မှီခိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်သော sensitive ကသွေးဆောင်။ အဆိုပါ vSub စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များဖို့တုန့်ပြန်ညှိနှိုင်းရေးအတွက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအရေးပါသောဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ vSub, အထူးသဖြင့်အတွင်း vSub-NAc လမ်းကြောင်းတစ်ဖိအားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးာင်းတုံ့ပြန်အတွက် DA စနစ်၏ hyperactivity များအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်း hown haves ။ အဆိုပါ LC-NE စနစ်နှင့်ယင်း BLA: ဒီဖွဲ့စည်းပုံကွဲပြားခြားနားသောဖိအားနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဖြင့် activated ခံရဖို့လူသိများနှစ်ခုအဓိကသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေး-relapse နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူသွေးဆောင်နိုငျပုံကိုနားလည်ရန်ကစိတ်ဖိစီးမှု-vSub-limbic စနစ်ကဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်သည့် pathophysiological ကိုပြောင်းလဲလေ့လာဖို့ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့သောသတင်းအချက်အလက်တဦးတည်းအတွက် pharmacological ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော vSub ဒါမှမဟုတ် BLA အတိုင်းဤ circuitry အတော်ကြာအဆောက်အဦများမှတဆင့်, စွဲလမ်းများအတွက်အနာဂတ် pharmacotherapy နှင့်ကုသမှုလမ်းညွှန်အတွက်အရေးပါသည်။
1 ။ Chen က BT, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, အ mesolimbic စနစ် Bonci အေ Synaptic plasticity: ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2010; 1187: 129-39 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
2 ။ Deadwyler လုပ် SA ။ နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေး Electrophysiological ဆက်စပ်မှု: သဘာဝအလျောက်ဆုလာဘ်စပ်လျဉ်း။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2010; 1187: 140-7 ။ [PubMed]
3 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis ။ Neuropsychopharmacology ။ 2001; 24: 97-129 ။ [PubMed]
4 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA, Rompre PP ။ ဦးနှောက် dopamine နဲ့ဆုလာဘ်။ Annu ဗြာ Psychol ။ 1989; 40: 191-225 ။ [PubMed]
5 ။ Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 80: 1-27 ။ [PubMed]
6 ။ Russo SJ, et al ။ အဆိုပါစွဲ synapses: နျူကလိယ accumbens အတွက် Synaptic နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ၏ယန္တရားများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience 2010 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ O 'Brien က CP ။ relapse ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဆေးဝါးများ Anticraving: psychoactive ဆေးဝါးများတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအသစ်သောအတန်းအစား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1423-31 ။ [PubMed]
8 ။ et al Shaham Y ကို။ သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်: မူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်။ Psychopharmacology (Berl) 2003; 168: 3-20 ။ [PubMed]
9 ။ Gawin FH, Kleber HD ကို။ ကိုကင်းချိုးဖောက် Abstinence symptomatology နှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါ။ လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက် Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1986; 43: 107-13 ။ [PubMed]
10 ။ et al lu L ကို။ ပထမဦးဆုံး6လအတွင်းကင်း Prime နှိုင်းယှဉ်ကင်းတွေကိုအားဖြင့်သွေးဆောင်တုံ့ပြန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများ: ကြွက်များတွင်တိုးချဲ့ဆုတ်ခွာကာလကျော်ရှာကြံကိုကင်း။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 176: 101-8 ။ [PubMed]
11 ။ et al Neisewander JL ။ Fos ပရိုတိန်းစကားရပ်နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက်ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 798-805 ။ [PubMed]
12 ။ Sinha R. ဘယ်လိုစိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ပါသလဲ? Psychopharmacology (Berl) 2001; 158: 343-59 ။ [PubMed]
13 ။ Bouton ME, Bolles RC ။ ငြိမ်းအေးကြောက်စိတ် reinstatement အခြေအနေများ Contextual လှုံ့ဆော်မှု၏အခန်းက္ပ။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို။ 1979; 5: 368-78 ။ [PubMed]
14 ။ Bouton ME ဘုရင် DA ။ Conditions ကိုကွောကျရှံ့၏မျိုးသုဉ်း၏ Contextual ထိန်းချုပ်မှု: ဆက်စပ်၏ The Associated တန်ဖိုးကိုများအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေ။ J ကို Exp Psychol Animation ပြုမူနေ Process ကို။ 1983; 9: 248-65 ။ [PubMed]
15 ။ Piazza PV, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1998; 19: 67-74 ။ [PubMed]
16 ။ et al Antelman သည် SM ။ ာင်းအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ကြွဆေးများ Interchange ။ သိပ္ပံ။ 1980; 207: 329-31 ။ [PubMed]
17 ။ Fanselow က MS ။ Contextual ကြောက်ရွံ့ခြင်း, gestalt အမှတ်တရများ, နှင့် hippocampus ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2000; 110: 73-81 ။ [PubMed]
18 ။ Jarrard LE ။ အဆိုပါ hippocampus တကယ်အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း? ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1995; 71: 1-10 ။ [PubMed]
19 ။ Maren အက်စ် Neurotoxic သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်ထဲမှာ ventral subiculum အသီးအနှံလိုငွေပြမှု၏လျှပ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1999; 113: 283-90 ။ [PubMed]
20 ။ Sharp က PE ။ အရပ်စကားစပ်နှင့်ဖြစ်ရပ်များ coding ထဲမှာ entorhinal / subicular ရာအရပျဆဲလ်နှိုင်းယှဉ် hippocampal များအတွက် Complimentary အခန်းကဏ္ဍ။ Hippocampus ။ 1999; 9: 432-43 ။ [PubMed]
21 ။ Mueller NK, Dolgas CM, Herman JP ။ အဆိုပါ ventral subiculum ၏တွေ့ရှိရပါသည်အောက်ပါ forebrain GABAergic စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်၏စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 1116: 132-42 ။ [PubMed]
22 ။ Lodge DJ သမား, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ အဆိုပါ hippocampus phasic အာရုံခံဆဲလျ activation များ၏ပြင်းထန်မှုကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျ Response modulates ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 1356-61 ။ [PubMed]
23 ။ Lodge DJ သမား, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ hippocampal drive ကို၏ဖက်တမင်းဆေးပြားကို Activation: အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းတစ်ဦးယန္တရား။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 7876-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ ဆက်စပ်မှု CM, Rosenkranz ဂျာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ နာတာရှည်အအေးမိစိတ်ဖိစီးမှုကြွက်များတွင် amygdala အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု prefrontal cortical မော်ဂျူပွောငျးလဲ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 382-91 ။ [PubMed]
25 ။ Rosenkranz ဂျာကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ pavlovian အေးစက်နေစဉ်အတွင်းအနံ့-evoked amygdala အလားအလာများ Dopamine-mediated မော်ဂျူ။ သဘာဝ။ 2002; 417: 282-7 ။ [PubMed]
26 ။ et al Vouimba RM ။ လွတ်လပ်စွာကြွက်ပြုမူ၏ dentate gyrus နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ amygdala အတွက် LTP အပေါ်မေးခှနျးထုတျစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 1887-94 ။ [PubMed]
27 ။ et al ဝမ် XY ။ စိတ်ဖိစီးမှုဟာ basolateral amygdala အတွက် glucocorticoid receptors မှတဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှတ်ဉာဏ်၏ reconsolidation ချို့ယွင်း။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 5602-10 ။ [PubMed]
28 ။ အဆိုပါ ventral subiculum မှ efferents amygdala ပြင်သစ် SJ, မိုဃ်းသီး JC, Totterdell အက်စ် Basolateral ဦးစားပိရမစ်ကြီးဆဲလ် dendritic ကျောရိုး innervate ။ ဦးနှောက် Res ။ 2003; 981: 160-7 ။ [PubMed]
29. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Bunney BS ။ nigral dopaminergic အာရုံခံ -2 ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပဆဲလ် electrophysiology ။ လုပ်ဆောင်ချက်အလားအလာထုတ်လုပ်ယန္တရားများနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ဆက်စပ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1983; 10: 317-31 ။ [PubMed]
30 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Bunney BS ။ တစ်ခုတည်းဆူးပစ်ခတ်ရန်: nigral dopamine အာရုံခံအတွက်ပုံစံပစ်ခတ်များ၏ထိန်းချုပ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1984; 4: 2866-76 ။ [PubMed]
31 ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Bunney BS ။ ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်: nigral dopamine အာရုံခံအတွက်ပုံစံပစ်ခတ်များ၏ထိန်းချုပ်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1984; 4: 2877-90 ။ [PubMed]
32 ။ et al Floresco SB ။ dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏ Afferent မော်ဂျူ differential လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဂီယာထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 968-73 ။ [PubMed]
33 ။ Lodge DJ သမား, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ အဆိုပါ laterodorsal tegmentum ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်အဘို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 5167-72 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ et al Groenewegen HJ ။ ကြွက်များတွင် ventral striatum ဖို့ subiculum ထံမှစီမံကိန်းအဖွဲ့။ Phaseolus ၏ anterograde သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးပြီးတစ်ဦးကလေ့လာမှု leucoagglutinin vulgaris ။ neuroscience ။ 1987; 23: 103-20 ။ [PubMed]
35 ။ Sinden JD, Jarrard LE, Grey ကဂျေအေ။ စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြည့်အပြီးမျိုးသုဉ်းရန်ခုခံအပေါ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန် subicular ibotenate ၏ဆိုးကျိုးများ။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1988; 73: 315-9 ။ [PubMed]
36 ။ Herman JP, Mueller NK ။ စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှုအတွက် ventral subiculum ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2006; 174: 215-24 ။ [PubMed]
37 ။ နေရောင် W က, Rebec GV ။ ventral subiculum ၏ Lidocaine inactivation ကြွက်များတွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ attenuates ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 10258-64 ။ [PubMed]
38 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 (ပျော့ပျောင်း 2): S91-117 ။ [PubMed]
39 ။ Post ကို RM, ကြွက်များတွင်ထပ်တလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင်းဆီအိပ်ချ်တိုးမြှင်ဆိုးကျိုးများ။ သဘာဝ။ 1976; 260: 731-2 ။ [PubMed]
40 ။ goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလီးယပ်အတွက် limbic နှင့် prefrontal cortical plasticity အကြား Dopamine-မှီခို interaction က accumbens: ကင်းာင်းအားဖြင့်နှောင့်အယှက်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 47: 255-66 ။ [PubMed]
41 ။ Pacak K သည်အလယ်ပိုင်း neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု၏ Palkovits အမ်ဖိအားတိကျတဲ့: စိတ်ဖိစီးမှု-related မမှန်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Endocr ဗျာ 2001; 22: 502-48 ။ [PubMed]
42 ။ O'Mara အက်စ်အဆိုပါ subiculum: အဲဒါကိုဘယ်သို့ပြုအံ့နည်း, ဘာလုပ်တယ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် neuroanatomy ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရသေးရှိပါတယ်။ J ကို Anat ။ 2005; 207: 271-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ Fendler K ကို Karmos, G, Telegdy G. အ pituitary-adrenal function ကိုအပေါ် hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Acta Physiol Acad သိပ္ပံ Hung က။ 1961; 20: 293-7 ။ [PubMed]
44 ။ ကန့် GJ, Meyerhoff JL, Jarrard LE ။ hippocampal ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်များတွင် reactivity ကိုနှင့်လေ့၏ထဲကဓာတုပစ်စညျးညွှန်းကိန်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1984; 20: 793-7 ။ [PubMed]
45 ။ လောရီ CA. serotonergic အာရုံခံ၏ functional များအနက်အချို့သာလျှင်: အ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကို Neuroendocrinol ။ 2002; 14: 911-23 ။ [PubMed]
46 ။ Valentino RJ, ဗန် Bockstaele EJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု neuromediators နှင့် locus coeruleus-noradrenaline သည့်စနစ်အကြား functional interaction က။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဦးနှောက်၏လက်စွဲစာအုပ်။ 2005: 465-486 ။
47 ။ et al Curtis AL ။ corticotropin-releasing အချက်၏ intracoerulear microinfusion အားဖြင့် locus coeruleus noradrenergic စနစ်၏ activation: ဥတုနှုန်း cortical norepinephrine အဆင့်ဆင့်နှင့် cortical electroencephalograph လှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 1997; 281: 163-72 ။ [PubMed]
48 ။ Jedema HP ကရေ့ AA ကို။ Corticotropin-releasing ဟော်မုန်းကိုတိုက်ရိုက်စသည်တို့အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ locus ceruleus ၏ noradrenergic အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 9703-13 ။ [PubMed]
49 ။ Loy R ကို, et al ။ အရွယ်ရောက်သူကြွက် hippocampal ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Noradrenergic innervation ။ J ကို comp Neurol ။ 1980; 189: 699-710 ။ [PubMed]
50 ။ Lipski WJ ရေ့ AA ကို။ Program ကိုအဘယ်သူမျှမ 1951, 2008 အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေးအစီအစဉျ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း; 2008 ။ အဆိုပါ ventral subiculum အတွက်အာရုံခံ noxious လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activated နှင့် noradrenergic afferents အားဖြင့် modulated နေကြသည်။
51 ။ et al Duncan က GE ။ မှတ်သားမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု: လူ့ခြင်းနှင့်ကြွက် hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် beta-adrenergic အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 561: 84-92 ။ [PubMed]
52 ။ et al Jurgen CW ။ hippocampal CA1 ကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှု၏ Beta3 adrenergic အဲဒီ receptor-mediated တိုးမြှင့်။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2005; 314: 552-60 ။ [PubMed]
53 ။ Raman ထားတဲ့ IM, Tong, G, Jahr အီး။ Camp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase အားဖြင့် Synaptic NMDA receptors ၏ beta-adrenergic စည်းမျဉ်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1996; 16: 415-21 ။ [PubMed]
54 ။ Snyder SH ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Putative neurotransmitters: ရွေးချယ်အာရုံခံလွှာမှ, subcellular ဒေသခံများနှင့်ဗဟိုမူးယစ်ဆေးဝါးများသရုပ်ဆောင်နှင့်အတူ interaction က။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1970; 2: 367-89 ။ [PubMed]
55 ။ Valenti အိုကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ 2008 အာရုံကြောသိပ္ပံအစည်းအဝေးအစီအစဉျ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း; 2008 ။ acute နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှု VTA DA အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသိသာနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ် activation သွေးဆောင်။ Program ကိုအဘယ်သူမျှမ 47911 ။
56 ။ et al Pacchioni လေး။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုမှဖြေတစ်ခုတည်းထိတွေ့စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုကိုနှိုးဆွဖို့အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ာင်း induces: NMDA receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2002; 965: 233-46 ။ [PubMed]
57 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G, Rajkowski J ကို, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတွက် locus coeruleus ၏ Cohen ကိုဂျေအခန်းက္ပ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 46: 1309-20 ။ [PubMed]
58 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G, Cohen ကို JD ။ locus coeruleus-norepinephrine function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ: သပ္ပါယ်အမြတ်နဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2005; 28: 403-50 ။ [PubMed]
59 ။ Smagin Gn, Swiergiel AH, Dunn AJ ။ Corticotropin-releasing အဆိုပါ locus coeruleus သို့အုပ်ချုပ်အချက်, ဒါပေမယ့်မ parabrachial နျူကလိယက, prefrontal cortex အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1995; 36: 71-6 ။ [PubMed]
60 ။ Valentino RJ, ခြေလျင် SL, စာမျက်နှာ ME ။ corticotropin-releasing အချက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏ noradrenergic ဖျန်ဖြေပေါင်းစပ်ဘို့ site တစ်ခုအဖြစ် locus coeruleus ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 1993; 697: 173-88 ။ [PubMed]
61 ။ Abercrombie ED, Keller RW, Jr က Zigmond MJ ။ pharmacological နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ: microdialysis perfusion ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် hippocampal norepinephrine လွှတ်ပေးရန်၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ neuroscience ။ 1988; 27: 897-904 ။ [PubMed]
62 ။ Korf J ကို, Aghajanian GK, Roth RH အ။ အဆိုပါ locus coeruleus ၏အခန်းကဏ္ဍ: စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်းကြွက်နှောက် cortex အတွက် norepinephrine ၏လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Neuropharmacology ။ 1973; 12: 933-8 ။ [PubMed]
63 ။ Weinshenker: D, Schroeder JP ။ အဲဒီမှာပြန်နောက်တဖန်: norepinephrine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေတဲ့ပုံပြင်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 1433-51 ။ [PubMed]
64 ။ Koob gf ။ Corticotropin-releasing အချက်, norepinephrine နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 46: 1167-80 ။ [PubMed]
65 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G, Harris က GC ။ အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာစဉ်ကရှာကြံတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအဘို့အဦးနှောက်အလွှာဟာ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 167-79 ။ [PubMed]
66 ။ Erb S က, et al ။ alpha-2 adrenergic အဲဒီ receptor agonists ကင်းရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 23: 138-50 ။ [PubMed]
67 ။ et al Villegier AS ။ postsynaptic alpha1b-နှင့် alpha2-adrenergic receptors ၏ stimulation ကြွက်နှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် dopamine-mediated locomotor လှုပ်ရှားမှုချဲ့ထွင်။ synapses ။ 2003; 50: 277-84 ။ [PubMed]
68 ။ Roozendaal B, McEwen BS, Chattarji အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှု, မှတ်ဉာဏ်နှင့် amygdala ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009; 10: 423-33 ။ [PubMed]
69 ။ et al ရို JB ။ footshock စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဆက်စပ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်အောက်ပါ amygdala အတွက်ချက်ချင်း-အစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 796: 132-42 ။ [PubMed]
70 ။ Rosenkranz ဂျာ Buffalari DM, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ ဗဟို amygdala ၏အာရုံခံအပေါ် basolateral amygdala နှင့် footshock ဆွ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန့်ကျင်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 59: 801-11 ။ [PubMed]
71 ။ Buffalari DM, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ နာတာရှည်အအေးမိစိတ်ဖိစီးမှု basolateral amygdala အာရုံခံ၏အလိုအလျောက်နှင့် evoked လှုပ်ရှားမှုအပေါ် norepinephrine ၏ excitatory သက်ရောက်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2009; 12: 95-107 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
72 ။ ဗန် Bockstaele EJ, Colago EE, Valentino RJ ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ခြေလက်အင်္ဂါများ Co-ရာ၌ခန့်များအတွက်အလွှာ: Amygdaloid corticotropin-releasing အချက်ပစ်မှတ် coeruleus dendrites locus ။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1998; 10: 743-57 ။ [PubMed]
73 ။ Buffalari DM, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ basolateral amygdala အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု Noradrenergic မော်ဂျူ: alpha-2 ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့် beta ကိုအဲဒီ receptor activation ဆန့်ကျင်။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 12358-66 ။ [PubMed]
74 ။ RE, et al ကိုကြည့်ပါ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ, relapse, နှင့် amygdala ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2003; 985: 294-307 ။ [PubMed]
75 ။ et al Ambroggi F ကို။ Basolateral amygdala အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နျူကလိယအားဖြင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူအာရုံခံ accumbens လွယ်ကူချောမွေ့။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 648-61 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
76 ။ Jedema HP ကရေ့ AA ကို။ အအေးစိတ်ဖိစီးမှုမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုစသည်တို့တှငျမှတျတမျးတငျထားသ locus coeruleus အာရုံခံ၏ electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများပွောငျးလဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2003; 28: 63-72 ။ [PubMed]